O weela anya ugbu a na ọ bụghị nanị na mmadụ kweere na Chineke ka e ji agụ ya nꞌonye ezi omume, kama ọ bụkwa nꞌihi na ndụ onye ahụ na omume ya, na-egosi na ọ na-erubere Chineke isi.
Ma site nꞌoge ruo nꞌoge, Jisọs na-ahapụ igwe mmadụ ndị a gaa nꞌebe ọ ga-anọ nanị ya ikpe ekpere.
Ya mere, ụmụnna anyị, ebe unu maara ihe ndị a nile, guzosienụ ike, jidesiekwanụ ozizi ahụ anyị ziri unu ike. Nọgidenụ nꞌozizi ahụ anyị mere ka unu mụta site nꞌozizi anyị ziri unu, ya na akwụkwọ anyị deere unu.
Ziekwanụ ha ka ha na-eme ihe nile m nyere unu nꞌiwu. Ma chetanụ na m na-anọnyere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ ụwa.”
Abụ m nri na-enye ndụ nke si nꞌelu bịa. Onye ọ bụla na-eri nri a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Nri nke m na-enye bụ anụ ahụ m, nke e nyere maka ịgbapụta ụwa nile.”
Ya mere, dị ka o siri bụrụ ihe rara ahụ na a pụrụ ịhụ mmadụ dị ndụ nke na-enweghị mmụọ, otu a kwa, okwukwe nke na-adịghị egosi onwe ya site nꞌọrụ ọma, bụ ihe nwụrụ anwụ.
Ma Mmụọ nke eziokwu ahụ na-abịa. Mgbe ọ bịara, ọ ga-eduba unu nꞌeziokwu nile. Ọ gaghị ekwu ihe banyere onwe ya. Kama ọ bụ ihe nile ọ nụrụ nꞌọnụ m ka ọ ga-ekwu. Ọ ga-ezikwa unu ihe nile nke na-aghaghị ime.